परिभाषा ओरेकल डेशबोर्ड - आईटी टेक स्कूल
21 अप्रिल 2017
परिभाषा ओरेकल डैशबोर्ड
ओरेकल ड्याशबोर्ड के हो?
कुन ड्याशबोर्डमा समावेश छ:
विभिन्न परीक्षाहरूको पछि लागेपछि
ओरेकल ड्यासबोर्डमा सामग्री प्राप्त गर्दै
कसलाई ड्यासबोर्ड बनाउन र परिवर्तन गर्ने आरोपमा छ?
वस्तुहरू जुन ड्याशबोर्ड पृष्ठमा थप्न सकिन्छ
ओराकल ड्याशबोर्डको नजरले के नियंत्रण गर्छ?
ओराकल ड्याशबोर्ड एक हो व्यापार खुफिया ड्याशबोर्ड, र एक व्यापार खुफिया ड्यासबोर्ड पछि प्रेरणा एक संघको शो छ कुञ्जी निष्पादन मार्कर (केपीआई) र यसको माप को वर्तमान स्थिति। साधारणतया, डेशबोर्डहरू एक स्क्रिनमा संख्याहरू, मापदण्डहरू, र निष्पादन स्कोरकार्डहरू समकक्ष र आर्केस्टरेट गर्दछ।
एक ड्याशबोर्ड कम्तीमा एक पृष्ठ छ, र पेजहरू तपाइँले खोल्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको वेब कार्यक्रममा पहुँच गर्न सक्ने सबै कुरा प्रदर्शन गर्न सक्दछ। पृष्ठहरू देखाउन सक्छन्:
यहाँ अनुसन्धान को परिणाम ओरेकल व्यवसाय खुफिया सर्भर द्वारा पठाएको उपज को समझाने को लागि परीक्षा मापदंड मा समायोजित। उपज परिवर्तन दृष्टिकोणमा देखा पर्न सक्छ, उदाहरणका लागि, ग्राफ, गेज, र तालिका। ग्राहकहरू त्यसपछि तोड्न र परिणामहरू हेर्न सक्छन्, पीडीएफको रूपमा खाली गर्नुहोस्, एचटीएमएल वा PDF को रूपमा प्रिन्ट गर्नुहोस्, वा स्प्रिेडसिटको परिणामहरू भाडामा लिनुहोस्।
संचालकहरु बाट सावधान
गतिविधि जडान र जडान मेनु
Oracle BI परिचय इन्वेंटरी भित्र लिफाफेहरूको दृष्टिकोण
Oracle BI को लागि वितरक रिपोर्टहरू
स्थापित सामग्री जस्तै रिपोर्ट वा साइट पृष्ठ
शुरुआती सूचकांकमा लिफाफेहरूको पर्खाइ
जब तपाइँ ड्याशबोर्ड खोल्नुहुन्छ, यसमा यो सामग्री एक वा पृष्ठमा देखाउँछ। तपाईं ड्याशबोर्ड पृष्ठहरू ट्याबहरू द्वारा शीर्ष ड्यासबोर्डको केहि भागमा भिन्न गर्न सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्डको माथिल्लो दाँयामा, तपाइँले एक उपकरण पट्टी देख्नुहुनेछ जुन तपाइँले यो साम्राज्य प्रदान गर्दछ:
ड्याशबोर्ड बदल्नुहोस् तपाईले आवश्यक लाभ र प्राधिकरणहरू दिनुभएको छ
ड्याशबोर्ड पृष्ठसँग काम गर्न विविध छनौट देखाउनुहोस्; हालको पृष्ठ छाप्नको लागि एक उदाहरण हो।
ड्याशबोर्ड बनाउनको लागी, एकसँग व्यवस्थापन ड्यासबोर्डको लाभ हुनुपर्दछ, र निरीक्षकले लाभको साथमा सौर्यता लिनु पर्छ।
ड्यासबोर्डमा मात्र उचित फाइदाहरू र सहमतिको साथ, र वस्तुहरू जुन यसमा थप्न सकिन्छ, ड्यासबोर्ड परिवर्तन गर्न सक्दछ। अधिक के हो, ड्यासबोर्ड परिवर्तन ड्यासबोर्ड पृष्ठ मार्फत प्रदर्शन गरिएको छ।
एक ड्याशबोर्ड निर्माताले तपाईंलाई ड्याशबोर्ड पृष्ठहरू समावेश गर्न र ती पृष्ठहरू बदल्न अनुमति दिन्छ। तपाईं पृष्ठका ढाँचाहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र ड्याशबोर्डमा लेख थप्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठहरूसँग क्षेत्रहरू र खण्डहरू छन् जुन ड्याशबोर्डको पदार्थ हो। प्रत्येक ड्याशबोर्डमा कम्तिमा एक पाना पृष्ठ छैन।
डेशबोर्ड पृष्ठहरू पहिचान गर्न ड्याशबोर्डको शीर्ष मद्दत माथि ट्याबहरू। विभिन्न पृष्ठहरू सामग्री व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग तपाइँको हरेक दिनका परीक्षाहरूबाट टाढाको परिणामहरू, तपाईंको प्रदायकहरूको साइटहरूमा जडान भएका अन्य पृष्ठहरू र तपाईंको कम्पनी इन्टरनेटसँग सहभागी अर्को पृष्ठबाट एक परिणाम हुन सक्छ।
ड्याशबोर्ड वस्तुहरू - यी चीजहरू जुन एकान्तमा काम गर्दछ ड्यासबोर्डमा। ड्याशबोर्ड आलेखहरूको कारणहरू समावेश गरिएको गतिविधि सम्मिलित हुन्छन्, खण्डहरू सामग्री समाउँछन्, र प्रवर्द्धित पदार्थ ड्यासबोर्ड भित्र एक किनारामा देखाइन्छन्।
सूची वस्तुहरू - के तपाईहरू वा अर्को ग्राहकले Oracle को व्यवसायिक खुफिया परिचय अन्वेषकसँग साझेदारी गरेको छ जसको लागि तपाईंले आवश्यक सहमति पाउनुभयो। दृष्टान्तहरू संकेतहरू, परीक्षाहरू र यो प्रारम्भिक शुरुआत हो।
उदाहरणका लागि, ड्यासबोर्डको उपस्थिति, सामग्रीको आकार र आधार छायामा नियन्त्रण गरिएको छ:
खालहरु - तिनीहरू Oracle ड्याशबोर्डको शो नियन्त्रण, उदाहरणका लागि, कर्पोरेट लोगो, आधारभूत ह्यूज, र शैली पानाहरू। बिन्दुमा जब ग्राहकहरू साइन इन गर्नुहुन्छ, खालहरू बिचमा विभाजित दोस्रो हुन सक्छन्। प्रशासकले नयाँ खोलहरू बनाउन सक्दछ वा पूर्वनिर्धारितहरू परिवर्तन गर्न सक्छन्।
शैलीहरू - राम्रो, शैलीहरूले शोको परिणामहरूको ढाँचा नियन्त्रण गर्दछ। यस्तो स्वरूपणले जडान र लेखहरूको छाया समावेश गर्दछ, आकारको पाठ र पाठ्य शैली, गुणहरूको आकार र ग्राफहरू, टेबलहरूमा बाहिर निस्कन्छ, र त्यो सुरुवात हो।
शैलीहरू आयोजकहरूमा आउँछन् जुन क्यारेस्सिङ स्टाइल पानाहरू (रेकर्डहरू CSS मा विस्तार), ग्राफ ढाँचा र तस्विरहरू समावेश छन्। प्रशासकहरूले नयाँ शैली पानाहरू बनाउन सक्छन् र अरूलाई परिमार्जन गर्न सक्छन्।
क्लाइन्टले केहि आकारहरूलाई शैली आकार र सामग्री आकार र तालिका फ्रिङ्गेसनमा ढाँचा गर्दा जब ढाँचा आउँछ। तिनीहरूले यो पूरा गर्नका लागि परिणाम ट्याबहरू प्रयोग गर्न सक्छन्।
कास्मेटिक ढाँचा - प्रसाधन सामग्री ढाँचा भनेको कुरा हो जसले ड्यासबोर्ड र नतिजाहरूको दृश्य शोलाई असर गर्दछ। तपाइँ यसलाई खण्ड, खण्डहरू र परिणामहरूमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। ड्याशबोर्ड पृष्ठहरूमा रिपोर्टहरू रिपोर्ट गर्दै
ओरेकल ड्याशबोर्ड प्रयोग गर्दा, तपाइँ कम्तिमा एक रिपोर्ट ड्यासबोर्ड पृष्ठमा थप्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मनपर्दो बनाउँदछ कि तपाइँ वैकल्पिक ग्राहकहरूलाई तपाईंका रिपोर्टहरू र ड्याशबोर्ड पृष्ठहरू योजना गर्न अपरेटरलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक विशेषज्ञले पूरै डैशबोर्डलाई ग्राहकमा पठाउनेछ, र यो रिपोर्ट द्वारा सन्दर्भित जानकारी पृष्ठ को प्रत्येक समावेश गर्दछ।
जब तपाइँ ड्यासबोर्ड पृष्ठको लागि व्यवसायिक बुद्धि वितरक रिपोर्टमा विशेषज्ञ बनाउने डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, सँगसँगै मापदण्डहरू सम्झनुहोस्:
बीई प्रकाशक रिपोर्टको व्यवस्था पीडीएफ ढाँचामा हुनुपर्दछ
विशेषज्ञलाई पीडीएफ ढाँचा वितरण गर्न सेट अप हुनुपर्छ
ड्याशबोर्ड पृष्ठको जवाफ थप्दा, तपाइँ यसलाई एक जडान वा प्रत्यारोपण पदार्थको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। स्थापित सुझावले ड्यासबोर्डको पृष्ठमा सीधा रूपमा प्रदर्शन गरिएको सुझाव दिन्छ।
10 ओरेकल आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू र प्रमाणिकरणले तपाइँलाई तपाइँको क्यारियरमा वृद्धि प्रदान गर्न सक्छ
सोलिस प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्ने - 1z0821 र 1Z0876